Ap1 Khabar | सरकारी सहायता खोज्दै होटल व्यवसायी - Ap1 Khabar सरकारी सहायता खोज्दै होटल व्यवसायी - Ap1 Khabar
सरकारी सहायता खोज्दै होटल व्यवसायी
ए.पी. वन खबर २०७८ श्रावण ७, बिहीबार ०७:४४
दुई वर्षदेखि ठप्प भएको होटल व्यवसायलाई सञ्चालनमा ल्याउन व्यवसायीहरुले सरकारको सहयोग खोज्न थालेका छन् ।
सरकारले नयाँनयाँ योजना ल्याए मात्र व्यवसाय माथि उठ्न सक्ने भन्दै व्यवसायीहरुले तत्काल सहकार्यका लागि सरकारसँग अनुरोध गरेको होटल एसोसिएनस नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले बताउए ।
कोभिडपछि दुबई, माल्दिप्स, श्रीलंकालगायतका देशमा पर्यटन क्षेत्र सुधार भैसकेको उदाहरण छ । हामीले पनि सरकारले साथ दिए यस्तै काम गर्न सक्छौ तर सरकारले साथ दिनुपर्छ, शाहले बताए ।
व्यवसाय उठ्ने अवस्थामा छैन, सरकारले कर असुल्न छाडेको छैन तर दुई वर्षदेखि एक रुपैयाँ पनि आम्दानी गरेका छैनौं कसरी कर बुझाउने उनले प्रश्न गरे ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक श्वेतपत्र ल्याउने तयारी गरेको छ । श्वेतपत्रमा के के समेटिन्छ र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
होटल व्यवसायीहरुले श्वेतपत्रमा सबै विषय समेटेर ल्याउनु पर्ने माग गर्दा समेत कुनै समन्वय नभएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । निषेधाज्ञा खुकुलो बन्दै गएपछि सामान्यतः आन्तरिक पर्यटनको चहलपहल शुरु भएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेटमा निजामती कर्मचारीलाई १० दिन पर्यटन काज दिने घोषणा गरेको छ तर यो काज कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट गरेको छैन ।
ससुराली र माइती भएको क्षेत्रमा काज जान नपाउने भन्ने चर्चा भए पनि यसको कार्यन्वयन हुनेमा शंका उब्जिएको छ । सरकारले नयाँ नयाँ योजना सार्वजनिक गर्ने गरेको तर कार्यन्वयनमा भने पटक्कै नल्याएको व्यवसायीको आरोप छ ।
सरकार घोषणा मात्र गर्छ कार्यन्वयन गर्दैन व्यवसायी पाल्देन शेर्पाले गुनासो गरे । यसअघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समेत आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने लक्ष्यका साथ निजामती कर्मचारीलाई देशदर्शन गराउने घोषणा गरेका थिए ।
तर, कार्यान्वयन हुन सकेन, उनले भने । पर्यटन क्षेत्र थला पर्दा होटल व्यवसायले खास मार खेप्नु परेको छ अव समस्यालाई पार लगाउन सबै क्षेत्रको समन्वयमा समधान गर्नु जरुरी छ ।
होटल र एअरलाइन्सले नयाँ नयाँ योजना बनाएको तर समन्वय नहुँदा कार्यन्वयन कसरी गर्ने भन्ने समस्या भएको होटल व्यवसायीहरुको आरोप छ ।
चालू आर्थिक वर्षदेखि विदेशी पर्यटकलाई ३० दिनको भिषा शुल्क मिनाहा गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७८र२०७९ शुरु भए पनि कार्यन्वयनमा आउन नसकेको शेर्पाले बताए ।
आर्थिक स्वेतपत्रमा बैंक, होटल, हवाइसेवा कम्पनी लगायतले के गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले के गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने तव मात्र व्यवसायले गति लिन्छ, उनको भनाइ छ ।
संसारभरका पर्यटकले नेपाल आउन इच्छा गरेको र पटक पटक बुझ्ने गरेको छ तर हामीले जवाफ दिन सकेका छैनौं, हानका वरिण्ठ उपाध्यक्ष शाहले बताए । भिषामा छुट पाउने की नपाउने स्पष्ट छैन, अन्तराष्ट्रिय उडान के हुने भन्ने अझै सरकारले स्पष्ट गराउन नसकेको उनले बताए ।
यता, होटलको अनुगमन गर्दै आएको पर्यटन विभागले भने कुनै पनि नयाँ योजनाहरु नल्याएको विभागका महानिर्देशक रुद्र सिं तामाङ बताए ।
कोभिडको मुख्य चपेटामा परेको होटल व्यवसायलाई थप सुधार गर्न मन्त्रालय र सरकारबाट निर्णय नभए विभागले अनुगमन मात्र गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।।
२० महिनादेखि पूर्ण रुपमा होटल व्यवसायले कसरी राजश्व तिर्न सक्ला यो प्रश्न गर्न सकेको छैन । हामीले चाहेर पनि कर बुझाउन सक्ने अवस्थामा छैनौं, हानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले बताए ।